गर्भावस्थामा व्यायाम कसरी गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
गर्भावस्थामा व्यायाम कसरी गर्ने ?
– डा. बालकृष्ण साह
शरीरलाई फिटनेस राख्नका लागि व्यायाम जरुरी हुन्छ । नियमित व्यायाम गर्ने मानिसहरु स्वस्थ अनि फुर्तिलो पनि हुन्छ् । त्यस्तै महिलाहरुले गर्भावस्थामा व्यायाम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्ने भए कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासालाई डा. बालकृष्ण साहले जवाफ दिएका छन् । गर्भाअवस्थामा पनि पहिलाहरु व्यायाम गर्न सक्छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पेटमा धेरै असर गर्ने, भारी बोक्ने र धेरै शक्ति खर्चिने व्यायाम गर्न मिल्दैन । गर्भवती महिलाहरूले हल्का खालका व्यायामहरू जस्तै— मर्निङ वाक, घरका सामान्य कामकाज, करेसाबारीको काम गर्दा रक्तसञ्चार राम्रो हुने भएकाले फाइदाजनक हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस गर्भ जाँच गराउने कम
साह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन्
याे पनि पढ्नुस यस्तेा अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाइने, निजी संस्थाले पनि ९८ दिन तलबी प्रसूति विदा दिनुपर्ने